Hello Nepal News » रमेश प्रसाईंले यी युवतीसँग कस्ने भए लगनगाँठो
‘पब्लिक स्पिकर’को रूपमा सेलिब्रेटी बनेका सञ्चारकर्मी रमेश प्रसाईंले घरजम गर्ने पक्का भएको छ । प्रखर प्रवक्ताका रूपमा परिचित उनी प्रसाईंले कालीकोटीका नन्दा सिंहसँग लगनगाँठो कस्ने पक्का भएको छ । उनीहरूले मंसिर २२ गते सोमबारका दिन धरानमा बिहे गर्न लागेका हुन् !
रमेश र नन्दा दुवै दृष्टिविहीन हुन् । ताप्लेजुङ थातथलो भएका रमेश लामो समयदेखि सुनसरीको धरानलाई कर्मथलो बनाएर काम गर्दै आएका छन् । यता, नन्दा भने काठमाडौंमा बालआश्रम सञ्चालन गर्दै आएकी छन् !
रमेश र नन्दाबीच पछिल्लो ३ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो । चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘इन्द्रेणी’को एक कार्यक्रममा रमेश र नन्दाबीच पहिलोपटक भेट भएको थियो । त्यसपछि रमेश आफैंले नन्दालाई प्रेम प्रस्ताव राखेपछि उनीहरूबीच प्रेम सुरु भएको थियो । प्रेम सम्बन्ध सुरु भएको ३ वर्षपछि रमेशकै प्रस्तावमा उनीहरूले बिहे गर्न लागेका हुन् ।
रमेश पछिल्लो समय ‘रिङ्केबुङको राँगो’ गीत गाएर चर्चामा आएका छन् । त्यसो त उनी विगतबाटै चर्चामा रहने प्रवक्ता हुन् । उनले विभिन्न विषयमा दिएका भाषण निकै रुचाइएका छन् । नेपाल–भारत सीमा विवादबारे उनले बनाएका केही भिडियो भाषणलाई सर्वाधिक रुचाइएको थियो ।
प्रकाशित मिति १६ मंसिर २०७७, मंगलवार १२:४०